हिजाे तल्लाे जा’त भन्दै जनावरको सि’नो फाल्न लगाउनेहरुले, आज मैले दिएको औ’षधि खालान त ? – Dainik Sangalo
हिजाे तल्लाे जा’त भन्दै जनावरको सि’नो फाल्न लगाउनेहरुले, आज मैले दिएको औ’षधि खालान त ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र ०३, २०७८ समय: १८:५५:३९
रौतहट, इनरुवाका भोला राम गाउँघरमा मरेका जनावरको सिनो फाल्ने काम गर्छन्। बाउबाजेदेखि गर्दै आएको यो कामले गाउँ सफा हुन्छ र स्याबासी पाइन्छ भन्ने उनलाई लाग्थ्यो। उल्टो मानिसहरू उनलाई ‘तल्लो जातको’ भनेर गिज्याउँथे। उनको मन बिझाउँथ्यो।
उनलाई सडेका सिनो छुँदा त्यति घिन लागेन, जति मान्छेको व्यवहारले लाग्यो। उनी त्यसलाई न पचाउन सक्थे न प्रतिरोध गर्न।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला????****
अरू पनि सिकाउन चाहन्थे, तर उनले जानेकै त्यत्ति थियो।दुई कक्षा पुगेपछि रामजी प्रथम भए। त्यसबापत् उनले पुरस्कार पाएनन्, बरू पिटाइ खानुपर्‍यो।गत सोमबार काठमाडौं टेकुस्थित वंशिघाट सुकुम्बासी बस्तीमा भेटिएका रामजीले भने, ‘तल्लो जातको मान्छे किन फस्ट भयो भनेर माथिल्लो जातकाहरूले पिटे। मेरो हात नै काटियो।’**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला????****
त्यसपछि स्कुलमा दलित र गैरदलितको ट्युसन छुट्टै हुन थाल्यो। पाँच कक्षासम्म रामजी प्रथम भइरहे। छ कक्षादेखि भने आधा घन्टा हिँडेर अर्को स्कुल जानुपर्ने भयो।स्कुल जान रामजीसँग चप्पल थिएन। पाइन्ट पनि घुँडामा प्वाल परेको थियो।
Last Updated on: August 19th, 2021 at 6:55 pm